समाजवादी शिक्षा कि पुँजिवादी ? - Naya Patrika
समाजवादी शिक्षा कि पुँजिवादी ?
चितवन, ६ साउन | साउन ०६, २०७५
सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा रहेको समाजवादी शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षा नीति, राणा काल, पञ्चायतकाल, राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा धेरै परिवर्तन भयो । अहिले समाजवादी शिक्षाको आवश्यकता सुनौलो अक्षरले लेखिए । तर नारा समाजवादको लगाएपनि काम भने पुँजिवाद तिर लम्किरहेको छ । यसमा मेरो घोर आपत्ती छ । शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने सरकार र सरोकारवालाहरुले तानाशाही पुँजिवादलाई प्रोत्साहन दिएको देख्दा कतै हाम्रा सहिदका रगत खेर जाला की भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
देशको एक मात्र प्राविधिक विश्वविद्यालय कृषी तथा वन बिज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अहिले माफियाको चंगुलमा फँसेको जस्तो देखिएको छ । केन्द्रीय क्याम्पस र नाममात्रको आङ्गिक क्याम्पसमा न त शिक्षक नियुक्ति नै छ न त पठन पाठनका लागि कक्षा कोठा, ल्याब र पुस्तकालय नै । भाडाको कोठा र भाडाको शिक्षकले कहिले सम्म चल्छ विश्वविद्यालय ? यस्ता विभिन्न समस्या सुल्झाउन छोडेर विश्वविद्यालयले निजिलाइ सम्बन्धन दिएको कुरा चर्चामा आएको छ ।
नेताको छोराछोरी सरकारी स्कुल पढाउन पर्ने भनेर नियम बनाउनेहरु नै निजीकरणको मलजल गरिरहेका छन । यि कुराले समाजवादको खोल ओढेका पुँजीवादीहरुको हालीमुहाली देखिन्छ र यसमा कतै करोडौंको चलखेल त छैन ?
ल्याण्ड ग्रान्ड मोडेलमा स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयको शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसार मुल म्यान्डेट हुन् । यस मोडेल अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक आङ्गिक क्याम्पस खुल्नु पर्छ । हाल जम्मा ४ वटा आङ्गिक क्याम्पस मात्र छन । आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसको स्तरोन्नती गर्न छोडेर निजिलाइ सम्बन्धनको लागि चलाएको कदम प्रति मेरो आपत्ति छ । बिगत देखी कृषि तथा वन बिज्ञान विश्वविद्यालय मौलाउँदै गएको माफियाकरण र शौक्षिक दलालको बिगबिगी अन्त्य गर्न सम्पुर्ण बिद्यार्थी संघ संगठनहरु निरन्तर लागिरहेका छन् । २ भदौ ०७४ मा भएको ७ बुँदे सम्झौता अनुसार आङ्गिक क्याम्पसको स्तरोन्नती नगरी र आवश्यक पुर्बाधार नपुगी निजिलाई सम्बधन नदिने भनी हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यसैगरि सम्पुर्ण बिद्यार्थी संघसंगठन, पदाधिकारी र अन्य सरोकारवालाहरुको सहमति बिना निजि सम्बन्धन नदिने स्पष्ट उल्लेख छ । अहिले सम्झौता तोडेको भन्दै विद्यार्थीहरु अन्दोलित हुँदै विश्विविद्यालयमा ताला लगाइ धर्ना बसिरहेका छन् । तर विश्वविद्यालयले प्रहरी प्रशासन लगाएर ताला फुटाईं विद्यार्थीको शान्तिपुर्ण आन्दोलनको धज्जी उडाउन खोजेको छ । प्रहरी दमन कम होस भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरुलाई कोठा भित्र साढे एक घण्टासम्म थुनेर ताला खोल्न धम्काइएको कुरा प्रति समेत आपत्ती जनाउन चाहान्छु ।
विद्यार्थीहरु अपरिपक्व छन् र सम्बन्धन दिने/नदिने विद्यार्थीको विषयको कुरा नभएको जिम्मेवार पदाधिकारीले वताउने गरेका छन् । आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमती उलंघन गर्ने उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीहरु चाँही कसरी परिपक्व हुन सक्छन ? अहिले प्राध्यापकहरु पनि विद्यार्थीसँग संयुक्त धर्ना कार्यक्रममा बसिरहेका छन् ।
नेताको छोराछोरी सरकारी स्कुल पढाउन पर्ने भनेर नियम बनाउनेहरु नै निजीकरणको मलजल गरिरहेका छन । यि कुराले समाजवादको खोल ओढेका पुँजीवादीहरुको हालीमुहाली देखिन्छ र यसमा कतै करोडौंको चलखेल त छैन ? कतै सरकारले सहिदको सपनालाई कुल्चिएर ३ करोड नेपाली जनताको मतलाई धज्जी उडाएको त होइन ?
तसर्थ निजीकरण तत्काललाई स्थगित गर्दै केन्द्रिय र भाडा कोठामा खोलिएको आङ्गिक क्याम्पसको स्तरोन्नती, सबै प्रदेशमा पुर्वाधार पु¥याएर आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गरेर मात्र आवश्यकता अनुसार निजि सम्बन्धन दिन जरुरी छ ।